As of Fri, 14 Aug, 2020 16:20
रैराङको ५६ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबीच ५६ लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सोमबार केही बढेको शेयर बजार आज भने सामान्य अंकले घटेको छ ।
सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित मूल्यलाइ आधार मानी पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन स्थगित गरेपछि १५ दिनको लागि समस्या टरेको छ । लगानीकर्ताले बुधबार पनि सेयर खरिद बिक्री नगरेर बजार ठप्प पारेपछि अर्थ मन्त्रालय आफ्नो निर्णय स्थगित गर्न बाध्य भएको हो ।
सेयर बजारमा कारोबार सुरु, सरकार झुक्यो
सेयर बजार सुचारु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्न सहमत भएपछि नेप्से खुलेको हो । सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको हकप्रद र बोनस सेयरमा लाग्ने लाभकरको निर्णय स्थगन गरेको छ । लगानीकर्ताको निरन्तरको आन्दोलन र बजार नै ठप्प पार्ने सम्मका गतिविधिका कारण सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भएको हो ।
सेयर मार्केटमा `कम्युनिस्ट कर´ !
नेपाली कांग्रेसले सेयर बजारको आन्दोलनलाई साथ दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवत्ता विश्व प्रकाश शर्माले पनि सेयर बजारको आन्दोलनलाई साथ दिएका हुन् । उनले उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गर्दै ट्विट लेखेका छन् -- सेयर मार्केटमा `कम्युनिस्ट कर´ ! नाफा कमाउंदा कर तिर्नु पर्छ l तर नाफा-घाटा टुंगो हुनु अघिनै कर तिर्नुपर्ने, सेयर मार्केटमा पसेको जनवादी बौद्धिकताको यो नितिले समृद्धिको यात्रालाई किमार्थ सघाउ पुर्‍याउंदैन l खारेज गरियोस् !!
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नबुझ्दा विवाद
आन्तरिक राजस्व विभागले हाल अभ्यासमा रहेको पुँजीगत लाभकर गणना पद्धति आफूअनुकुल व्याख्या गर्दा सेयर लगानीकर्तामाथि करको अप्रत्याशित भार थपिएको छ । हाल हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्य निर्धारण अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गर्दा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकार नगरेपछि समस्या झनै बढेको हो ।
साताभर नेप्से ७ अंकले वढ्यो
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २३५४८ कारोबारबाट दुई अर्ब आठ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका ४७ लाख ४४ हजार आठ सय १० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ८.५६ प्रतिशत बढी हो ।
रैराङ हाइड्रोपावरको सेयर व्यवस्थापन भिवोरबाट
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयर व्यवस्थापन भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ ।
साताभर नेप्से २० अंकले घट्यो
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार १९७१३ कारोबारबाट एक अर्ब ९२ करोकड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरका ४१ लाख ३७ हजार चार सय ३० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् ।
सेयर बजारमा ४ अंकको गिरावट
सेयर बजार घट्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ । मंगलबार ४ अंक भन्दा धेरैले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक बुधबार पनि सोही गतिमा घटेको हो ।